နောက်ဆုံးရကုန်ပစ္စည်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ - Tortlay តថ្លៃ - ကမ္ဘောဒီးယားတွင်အွန်လိုင်းလေလံ
အားလုံး Featured လေလံ
ပါ Advanced Search
Tortlay តថ្លៃ - ကမ္ဘောဒီးယားတွင်အွန်လိုင်းလေလံ > လေလံ > battery, case, cover, iphone, skin > mophie ဖျော်ရည်ဗူးပေါင်းကို iPhone 4s /4များအတွက်ဘက်ထရီဖြစ်ရပ်မှန် – (2,000mAh ဘက်ထရီ) – ပန်းခရမ်းရောင်
ရီးရဲလ် Techniques အံ့ဖွယ်အသားအရေရေမြှုပ် (2 အသီးအသီးဗူးထဲမှာရေမြှုပ်)
အပေါ် Posted March 10th, 2017 အားဖြင့် soweic
အခုဝယ်ပါ $9.24 This versatile beauty tool was designed witharevolutionary foam technology to evenly blend makeup forasmooth, enhanced finish. Use damp foradewy glow or dry forafull coverage. Ideal for foundation and it’s latex-free. For best results, replace your makeup sponge every 1-3 months.Versatile3တွင် 1 design […]
acrylic မျက်လုံးကှနျ့ / နှုတ်ခမ်းကှနျ့စည်းရုံးရေးမှူး & အလှအပစောင့်ရှောက် Holder ပေး 26 space ကိုသိုလှောင် | byAlegory (အစိုင်အခဲက Black) မိတ်ကပ်စည်းရုံးရေးမှူး
အခုဝယ်ပါ $36.99 ဒီထုတ်ကုန်အကြောင်းဒီပရီမီယံ acrylic မျက်လုံးကှနျ့ & Lip Liner Organizer Comes With 26 Individual Spaces With An Efficiently Sized Footprint. SIZE: 5L x 2.16W x 2.16H Inches & Comes With (20) Regular Slots Measuring .34 Inches In Diameter And Comes With (6) Jumbo Slots In The Front Measuring .50 Inches […]
L’oréal® Paris Infallible High Pigment Density, တွန့်ကိုခံနိုင်ရည် 24 နာရီမျက်လုံးအရိပ် (L’Oréal® Paris Infallible 24HR Eye Shadow – ခရမ်းရောင်ဦးစားပေး 758)
အခုဝယ်ပါ $5.45 အစဉ်အဆက်တို့သည် 1st အချိန်, L’Oreal Paris introduces an ultra intense eye shadow that lasts from day until dawn-a full 24 နာရီ. This revolutionary formula fuses the ease ofapowder with the velvety caress ofacream to createaunique hybrid that glides on effortlessly. And with its unique technology, […]
စင်ကြယ်စေ Blackhead ဖယ်ရှားခြင်းရှီလင်3အဆင့် Kit, ဝက်ခြံကုသမှုမျက်နှာ cleanser, Black ကပီးလ်-ချွတ်မျက်နှာဖုံး
အခုဝယ်ပါ $29.80 ကျော်ကြား Peel-OFF မျက်နှာဖုံးပါဝင်သည်, the BESTSELLING Deep Sebum Softener and Clarifying Toner. The latest trend in skincare, try the bestselling peel-off mask loved by beauty bloggers and as seen on YouTube. ELIMINATES BLACKHEADS, ACNE, OIL – Activated charcoal works likeamagnet to draw out impurities and peels away blackheads, acne and oil quickly […]
ရေစိုခံ Matte အရည်နှုတ်ခမ်းနီကလောင်နှုတ်ခမ်း gloss သတ်မှတ်မည်တည်မြဲ Spdoo 15Pcs Long က
အခုဝယ်ပါ $15.99 Beauty Long Lasting Waterproof Matte Lip Liquid Pencil Lipstick Lip Gloss Makeup Tips: 1. It’s Waterproof, and would Not stick on Cup. 2. it’s better to use the lip balm or based lip items before putting it on your lip. 3. It will have good effect if you applyavery thin […]
Maybelline New York ကလိုင်း Express ကို Eyeliner, Blackened Sapphire 908, 0.04 အောင်စ
အခုဝယ်ပါ $7.10 Intense color formula smart tip smudger makes this liner glide on smoothly and is easy to apply with just one stroke. Creamy formula delivers intense color. contour smudger makes blending easy. All day wear. Safe for eyes and ophthalmologist tested. Contact lens safe.Creamy, intense colorBuilt in smart tip smudgerSafe for eyes and […]
Vaseline Intensive စောင့်ရှောက် lotion ရင့်ကျက်, အရေပြား rejuvenation 20.3 အောင်
အပေါ် Posted မတ်လ 9, 2017 အားဖြင့် soweic
အခုဝယ်ပါ $5.24 Our Mature Skin Rejuvenation Healing Moisture Lotion is not an ordinary moisturizer. Made with intensitve moisturizers, Vitamin B3 and PPAR Activators, it’s formulated to heal the intense dryness often associated with mature and aging menopausal skin, giving you softer, healthy looking skin. From the very first application, Vaseline Intensive Care Mature Skin […]
Anti-အိုမင်းခြင်းဟာ Device ကိုအမြင့်ကြိမ်နှုန်းတုန်ခါမှုအနှိပ် TOUCHBeauty မျက်လုံး, 40℃ Heated Wand , အမှောင် Circles သက်သာနှင့် Puffiness မျက်လုံး&facial စက်ပစ္စည်း
အခုဝယ်ပါ $59.98 TOUCHBeauty EYE MASSAGER isahigh frequency beauty instrument combines 40℃ Heat Massager with High Frequency Vibration method to work, design to removes dark circles and puffiness around our eyes. Eyes are the window of the soul, it’s important to care your eyes every day. What can it do for you? ✔Make […]
Revlon Photoready ဆေးမှုတ် Mousse မိတ်ကပ်, vanilla, 1.4 အောင်စ
အခုဝယ်ပါ $8.99 New REVLON photoready air brush mousse makeup’s revolution in mousse mimics the results ofamakeup artist’s air brush, foraflawless, air brushed finish, whether it’s on camera or in person.The whipped texture allows you to blend evenly for undetectable coverage, leaving you withasmooth, pore less complexionThe formula’s photo […]
SHANY အဆိုပါလက်ရာ7အားလုံးတစ်ဦးကမိတ်ကပ်သတ်မှတ်မည်ခုနှစ်တွင်အလွှာ – “မူရင်း”
အခုဝယ်ပါ $39.95 သုတေသန၏နောက်ခြောက်လအကြာမှာတော့, စမ်းသပ်ခြင်း, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ #shanynation ဆီက input, we created our instant best-seller The SHANY 7-Layer Masterpiece Makeup Set. This set comes withatotal of seven removable and interchangeable layers of high-quality/ high-pigmented makeup. You can find four layers of matte, shimmer, and pearl eye shadows that glide […]
စာမျက်နှာ 1 ၏ 90112345...102030...»နောက်ဆုံး »
သူ Carl A1 DT638 ပရီမီယံစက္ကူညှပ်
Posted in, အခြားသူများက
အမြိုးသမီးမြားလက်ဝတ်ရတနာမျ​​ားအတွက်ပန်းမျက်မှန်နှင့်အတူဇိမ်ခံကား DIY ဥရောပငွေ Charm လက်ကောက်
9Samsung က Galaxy S4 ကိုအဘို့ H ကိုပရီမီယံဒေါသကို Glass ကို Screen ကိုကာကွယ်ပေးသူရုပ်ရှင်ပွဲတော်
Posted in, ဖုန်းများနှင့် Tablet များ
လက်ဆောင်များ၏သစ်ပင်တပင် – လက်ဆောင်ပေးမယ်ပစ္စည်းဆိုင် Display ကိုဗီနိုင်းစတစ်ကာများ
Posted in, ပရိဘောဂများ
Timer2multi-function ကို NFC ကိုစမတ်လက်စွပ်တံခါး Lock ကိုအန်းဒရွိုက်ဖုန်းများအတွက်ရေစိုခံ
Posted in, အီလက်ထရောနစ်
တပတ်ရစ်ရေခဲသေတ္တာ – ရောင်းမည်: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရော်ဘာ-B282M
100ml ကိုဘတ်ဂျက် roller REJUVINATOR, Cleaner စက္ကူခေါက်စက် folder ကို inseterter
3Samsung က Galaxy S4 ကို I9500 FOR x ကို Clear ကို LCD ကိုစောင့်တပ်ဖွဲ့ Shield ကို Screen ကိုကာကွယ်ပေးသူရုပ်ရှင်ပွဲတော်
USB မှတ် Flash ကို SSK 4GB
mophie ဖျော်ရည်ဗူးပေါင်းကို iPhone 4s /4များအတွက်ဘက်ထရီဖြစ်ရပ်မှန် – (2,000mAh ဘက်ထရီ) – ပန်းခရမ်းရောင်
မူပိုင်ခွင့်© 2015 Tortlay តថ្លៃ - ကမ္ဘောဒီးယားတွင်အွန်လိုင်းလေလံ. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး